IBHEDI PHAMBI KWEFESTILE (IINGCAMANGO ZOKUYILWA KWEGUMBI LOKULALA) - UKUHOMBISA
Eyona Ukuhombisa Ibhedi Phambi Kwefestile (Iingcamango Zokuyilwa Kwegumbi Lokulala)
Ibhedi Phambi Kwefestile (Iingcamango Zokuyilwa Kwegumbi Lokulala)
Apha sixoxa ngombhede phambi kweefestile zokuma, kubandakanya iingcebiso ezithandwayo kunye noyilo lweFeng Shui.
Xa ujonga indawo yokubeka ibhedi yakho kwigumbi lokulala, ukuyibeka ecaleni kwefestile lolunye ukhetho oluhlala lubangela impikiswano. Ngaphandle kokungathandwa kwayo, ngokuqinisekileyo zikho iindlela zokwenza esi sikhundla sisebenze ngokumangalisayo-ifuna nje ingqondo evulekileyo kunye neliso lokuyila.
Uyenza kanjani le Ndawo yokulala isebenzele wena
Ibhedi phantsi kokhuseleko lwe Window
Ibhedi phantsi kweewindows Negatives
Ibhedi Phambi kwe Window yeFeng Shui
Ukuba nesingqengqelo sakho ngokuchasene nefestile kunika ithuba elininzi lokuyila ngokwenza ibhedi ngombala omangalisayo wefestile. Ukuqinisekisa ukuba iwindow ayithathi kwinqanaba leziko, kukho iindlela zokulinga ngeempahla, imibala kunye neepatheni ukuzisa ngokwenene ibhedi ngokwayo.
Ukuqinisekisa ukuba akukho nanye ifestile efihliweyo yokwandisa amanqanaba okukhanya kwisithuba, amakhethini okanye iidreyini kufuneka zixhonywe phezulu kwaye zibanzi.
Unokucinga ngokubeka ibhedi embindini wegumbi, ekwabizwa ngokuba sisiqithi sebhedi esiya kuthi sikhuphe iliso kude neefestile. Ngenye indlela unokuvumela ibhedi ukuba inyuse ukugxila kwiifestile, ngokuyivumela ukuba ihlale ecaleni kwaye ibabeke.
Ngokuchasene nenkolelo edumileyo, awunyanzelekanga ukuba ube namava okukhanya ancitshisiweyo kunye nebhedi ebekwe ngokuchasene nefestile. Ukuba ubeka iifestile zakho ngokuchanekileyo, kwaye uqwalasele ukulahla i-headboard, okanye ukhetha isakhelo esivulekileyo sebhedi, uya kuvumela ukukhanya kwendalo ukuba kucocwe kungene kule ndawo yangaphakathi.
Nangona kunjalo, kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uzijongile… Akukho nto yokubaleka kwinto yokuba ibhedi izakuba ithintela umbono wangaphandle, onokuziva ungaqhelekanga. Ukukwazi ukujonga ngaphandle kunokuba kubaluleke kakhulu ekukhuthazeni ukuhlala kakuhle.
Ubuthongo bakho bunokuphazanyiswa zizinto. Ukuma ngentloko ecaleni kwefestile kuthetha ukuba ubuso bakho ikakhulu yinxalenye yokuqala yomzimba wakho ukuze ubethwe yimitha yasekuseni; mhlawumbi ukuthengwa kwemaski yamehlo, okanye amakhethini amnyama kufuneka abe semakhadini! Kwangokunjalo, ngexesha lasebusika unokuqaphela ukuphola okungaphezulu ecaleni kwefestile.
Iziphumo kwiFeng shui embi. Mhlawumbi uvile ngeFeng Shui, kwaye le ndlela yoyilo iyabatyhafisa ukubekwa kwebhedi kufutshane nefestile. UFeng shui uchaza indlela ukwanda kokuvezwa kwesi sikhundla kwizinto ezinokubangela amandla amabi kwaye kukhokelele ekunciphiseni impilo.
Akunzima ukukhetha ezinye zezinto ezimbi zokuba unebhedi ecaleni kwefestile:
• Ungcoliseko lomoya lwangaphandle - alunampilo kwaye lunokuba nefuthe elibi ekulaleni
• Ukungcoliseka kwengxolo- kunokubangela umsindo kunye noxinzelelo, olingana ne-chi embi
• Ungcoliseko lokukhanya - njengoko kuchaziwe ngaphambili, lunokunyusa ukuphaphama kwakho kunye nokunciphisa imvakalelo zokuphumla
Ukuba esi sikhundla asinakuphepheka kwindawo yakho, kukho iindlela zokunciphisa i-Feng Shui engeyiyo:
Ngokungafaniyo nengcebiso yethu yangaphambili yesakhelo esilula / ibhodi ebhodi, i-Feng shui icebisa ukukhusela ibhedi ngebhodi eqinileyo, eqinileyo.
Akukho zimbombo zibukhali zivumelekile, kwaye ibhodi eyintloko kufuneka iqhotyoshelwe ebhedini endaweni yodonga. Udonga oluqinileyo, okanye kule meko ibhodi eqinileyo yentloko ifanekisela intaba ekhuselayo (elungileyo!).
Yongeza igumbi elimnyama ukuze kugcinwe ukukhanya, kwaye unciphise ubukhali ngokujikeleza okujikelezayo. Iimpawu kufuneka zenziwe ngezinto zendalo. Sebenzisa isilika kunye nelinen ukulungiselela iidrapes kunye namakhethini, kwaye uqinisekise ukuba zinzima ukugubungela indawo.
Ngaphandle kokuba unombhede ngokuchasene nefestile ungalunganga, kukho iindlela zokwenza ukuba usebenze ukuze kuqinisekiswe ukuhamba ngokukhululekileyo kwe-chi ngaphakathi kwigumbi lakho lokulala. UFeng shui ecaleni, the uyilo lwewindows uqobo lwayo lunokubonelela ngemvelaphi enkulu yokufaka isakhelo sakho, ngokubonelela ngefestile yokunxiba kwinqanaba.
Nokuba uyayilandela uyilo lweFeng shui okanye hayi, kuyacaca ukuba ubume budlala indima enkulu ekwenzeni le ndawo yokulala isebenze. Nokuba oko kubandakanya izinto ezisetyenziselwa ukunxitywa kwefestile, okanye uhlobo lwebhodi ekhethwe kuzo zonke ziya kudlala indima yazo ekwenzeni ibhedi phambi kwefestile isebenze kuyilo lwakho.
Fumana ngakumbi ezinxulumene Uyilo lwegumbi lokulala kweli phepha.
Ukwamkelwa koMtshato kweActor yeActor uPriyanka Chopra kunye nomculi waseMelika uNick Jonas
Iingcinga zoMtshato zikaHarry Potter ezingama-29 eziFana noMlingo
Ubungakanani boMnyango weGaraji eliMgangatho (ongatshatanga, oBini kunye nesiqhelo)
Icala lokuzonwabisa likaMeghan Markle njengeCalligrapher linokuba luncedo kumtshato wakhe kwiNkosana uHarry
I-Big Bang Theory kaJim Parsons Utshata ixesha elide Iqabane Todd Spiewak: Jonga ifoto yokuqala
Shiplap Kitchens (Iingcamango zoyilo)
Imodeli u-Anne Vyalitsyna Uzibandakanya noSomashishini uAdam Cahan: Jonga iRing yakhe yokuzibandakanya!
Amanga Amakhulu Amakhulu 'Zoe Kravitz Ngaba Ukucwangciswa Komtshato Kancinci Kodwa Ngokuqinisekileyo
Umyeni kaLeighton Meester uAdam Brody uyakuvela kwiNkqubo yakhe eNtsha (kwaye indima yakhe iyamangalisa)
UKelly Ripa utyhila uMzuzu awayesazi ukuba uMark Consuelos uya kuba ngumyeni wakhe wexesha elizayo
Umtya omtsha we-Makeup kaCharlotte Tilbury Wenzelwa iMithombo yeendaba yezeNtlalontle ukuze ulungele iHashtag yoMtshato
Umlingane kaRyan Lochte kaKayla Rae Reid ukhulelwe! Jonga iSibhengezo soMntwana
U-Lance Armstrong ubandakanyeke kumhlobo wakhe u-Anna Hansen
UGabourey Sidibe utyhila indlela awatshata ngayo ngexesha likaJimmy Kimmel Prank yomtshato
Iindidi zekhaphethi (Isikhokelo sokugqibela)
utshintsha njani igama ngokusemthethweni
ilokhwe elula yomtshato kunye nobukhulu
iphepha lokubala lomtshato labantwana
Ungalitshintsha njani igama lakho eTennessee
iilokhwe zokunxiba emtshatweni
Ukuchukumisa itompu engena ngaphandle kokuchukumisa (Umahluko, iiProses & Cons)
UKate Spade kunye neKeds bavele baphosa omnye uMtshato weSkyaker Collection
Iipateni zoMgangatho woMthi (Ubeko kunye nesikhokelo soYilo)